Iran: Notsaraina i Abtahi ilay reformista sangany · Global Voices teny Malagasy
Iran: Notsaraina i Abtahi ilay reformista sangany
Voadika ny 22 Oktobra 2018 5:14 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Nederlands, Español, English
Mohmmad Ali Abtahi , bilaogera sangany sady filoha lefitra reformista teo aloha, dia anisan'ireo olona ampolony nanohitra ny valim-pifidianana tamin'ny 12 Jona 2009. Notsaraina tao amin'ny tribonaly tao Teheran ireo mpanao fihetsiketsehana.
Tao amin'ny lapam-pitsarana, i Abtahi, izay niseho tamin'ny akanjo fitafy ho an'ny gadra, dia hita reraka sy toa nihen-danja. Nogadraina nandritra ny herinandro maromaro i Abtahi ary tsy afaka nifandray tamin'ny olona tety ivelany, hoy izy tao amin'ny tribonaly hoe, “Hoy aho amin'ireo namako sy ireo namana rehetra izay maheno antsika, lainga ny olana momba ny hosoka tao Iran ary natao hamoronana korontana mba hahatonga an'i Iran ho toa an'i Afghanistan sy Iraka izany ka hahatonga azy ho tratran'ny faharavana sy ny zava-tsarotra … ary tsy hisy anarana na soritra revolisiona ho tavela intsony raha mitranga izany. “
Voampanga ho nandray anjara tamin'ny “fanonganam-panjakana volory” manohitra ny fitondrana i Abtahi .
Bilaogera maromaro no naneho hevitra tamin'ilay antsoina fatratra hoe fibabohan'i Abtahi sy ny fanatrehany ara-batana. Maro no namoaka ny sariny taloha sy taorian'ny fisamborana azy. (ETSY AMBONY: Ankavia, talohan'ny fisamborana, Ankavanana, tao amin'ny fitsarana ).
Nilaza i Kaveh Ahangar fa azontsika jerena ny porofon'ny fampijaliana sy ny fandrahonana ao ambadiky ny teny tsirairay navoakan'ny vavan'i Abtahi. Nanampy ilay bilaogera fa nanjary nihetsi-po sy nitomany izy rehefa nahita an'i Abtahi tao amin'ny fahitalavitra .
Nanoratra i Alfba hoe: “Ry Abtahi namako, fantatray fa teo ambany tsindry ianao ary tena mijaly ny fianakavianao. Tokony ho fantatrao izay ekenao, mbola tia anao foana izahay. Manohana anao izahay. “
Nisioka tamim-panesoana i Forever696 fa raha mino ny latsa-bato miisa 24 tapitrisa ho an'i Ahmadinejad ny olona dia hino ireo fitsarana ireo .
Nanoratra i Saharlar hoe “an'i Abtahi androany, anjaran'iza ny rahampitso? Nangataka ny mpamaky mba tsy ho kivy ary tsy handray ho matotra ireo karazana “fampisehoana” ireo ” ilay bilaogera.